महिलामाथिको एकप्रकारको लैंगिक हिंसा नै हो । - Nepali Nepse
महिलामाथिको एकप्रकारको लैंगिक हिंसा नै हो ।
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०९:३८
भिडभाड र काठमाडौमा अत्याधिक ट्राफिक छिचोल्नको लागि म प्राय जसो स्कुटरमै हुइकिने गर्छु ! कालिकास्थान १४ नं. स्टक हाउस पुग्न मात्र के लागेकि थिएँ , एउटै बाइक बुलेटमा तिनजना पुरुषहरु बिपरित दिशाबाट यसरी आए लाग्यो कि उनिहरु मोटरबाइकमा होइन रकेटमा उड्दैन् ! र नजिकै बाट यसरी बाइक ल्याय कि म अतालिएर रोक्न खोज्दा खोज्दै लड्न पुगेंछु ! जानिजानि साइड च्याप्दै , हर्न बजाएर आतंकित पार्दा कति कति गारो भयो होला ? ओपन हार्ट सर्जरी गरेकी मान्छे म । झन्नै अस्पताल जानुपरेको । के ढाँट्नु तपाईहरुलाई !
झगडा गरौं, उल्टै लफडामा फसिने डर । उजुरी गरौं, यस्ता प्रकृतिको अन्याय विरूद्ध कहाँ उजुरी गर्ने ? फेरि उजुरीपछि यस्ता अन्याय गर्नेलाई के कारवाही हुने ? निर्मला हत्या गर्ने हत्यारालाई यत्रो दिनमा सरकारले चाहेको भए यो लोक त के कुरा, बाँकी तीनै लोकमा खोजेर भए पनि कार्वाही गर्न सक्थ्यो ! यस्तो देशको नागरिक बन्न अभिशप्त छौं हामी ! यो समाजमा खरपाखोको डढेलोझैँ फैलिरहेको बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा देखेर हामी बाँचेका सबै नारीहरू सन्त्रस्त छौं ।
जता हेर्‍यो, सबैतिर अन्योल र अस्पष्टता मात्रै छ ।
म त्यहीँबाट कुरूप अवस्थामा घर फर्किएँ । मनस्थिति पूरै बिगर्यो । तैपनि आफूलाई सम्हालें । घरमा आएर नुहाइवरि कपडा फेरेर पुनः बाहिर निस्किएँ ।
अन्तर्वार्ता सकेर घर फर्किएँ । सडकको हिलो अहिले धुलोमा रूपान्तर भएको थियो । काठमाण्डौं साँच्चैको धुलमाण्डौं भएको थियो । कति ठाँउमा त हेडलाइट नै बालेर हिँड्नु पर्ला जस्तो भएको थियो । मुखमा लगाएको मास्कले धुलो छेकिरहेको थिएन । चश्माले आँखाको सुरक्षा दिन सक्ने कुरै भएन । वाफ रे वाफ ! सास फेर्न र आँखा हेर्न पनि कति गाह्रो ?
संसारका ठूला शहरहरूको त्यति धेरै जानकारी राख्ने मान्छे त म होइन । तर, मेरो जानकारीमा यति उचाइमा, यति प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, यति फराकिलो उपत्यका संसारमा अर्को ठाउँमा कहिँ कतै छैन होला । र, यो पनि त्यतिकै सत्य हुन सक्छ कि यतिको भद्रगोल र फोहोर राजधानी संसारमा अर्को सायदै होला ।